Romelu Lukaku Oo Barbarreeyey Rikoodh Khaas U Ahaa Samuel Eto'o, Ronaldo Iyo Milito - Gool24.Net
Romelu Lukaku Oo Barbarreeyey Rikoodh Khaas U Ahaa Samuel Eto’o, Ronaldo Iyo Milito
Weeraryahanka reer Belgium ee Romelu Lukaku ayaa xalay dhaliyey goolkiisii 30aad ee xi;li ciyaareedkan, waxaanu barbarreeyey rikoodh ay halyeeyo hore u dhigeen kooxda.
Lukaku ayaa dhaliyey goolkii furitaanka ee ciyaartii ay xalay Inter 2-0 ku garaacday Getafe, taas oo ay ugu gudubtay wareegga siddeeda, waxaanu goolkaasi noqday mid uu ku samaystay taariikh shaqsi ah.
Weeraryahankan hore ee Manchester United oo kooxdiisa Inter u dhaliyey 23 gool oo Serie A ayaa waxa uu ku daray toddoba gool oo kale oo tartamada kale ah, kuwaas oo tirada goolashiisa xili ciyaareedkan ka dhigay 30, waxaanu ka gudbahy rikoodhkii goolashii uu Manchester United u dhaliyey xili ciyaareedkii 2017-18 oo ahaa 27 gool.
Xiddigan ayaa waxa uu noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee Inter Milan u dhaliya 30 gool tan iyo xili ciyaareedkii 2010-11 oo uu Samuel Eto’o dhaliyey goolal tiradoodu ahayd 37 xili ciyaareed kaliya, iyadoo ay sannadkaas kooxdu ku wada guuleysatay Champions League, Serie A iyo Coppa Italia.
Lukaku waxa kale oo uu ku biiray liiska halyeeyadii afka hore uga ciyaari jiray Inter Milan ee Diego Milito iyo Ronaldo Nazario oo min 30 gool iyo ka badan u dhaliyey.
Ronaldo Nazario ayaa xili ciyaareedkiisii ugu horreeyey ee uu Inter Milan uga soo wareegay Barcelona waxa uu u saxeexay 34 gool, waxaana Lukaku sharaf u ah inuu ku biiro liiska ciyaartoyda dhif iyo naadirka ah ee soo maray Inter Milan.
Rikoodhka farxadda u ah weeraryahanka reer Belgium ayaa ah inuu barbarreeyey Eto’o, Ronaldo, Milito iyo xataa rikoodhkii halyeygii Newcastle United iyo Blackburn Rovers ee Alan Shearer.